IINGCAMANGO EZIPHAMBILI EZINGAMA-36 ZEGADI YANGAPHAKATHI - IKHAYA LANGAPHAKATHI KUNYE NOYILO - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango eziPhambili ezingama-36 zeGadi yangaphakathi - Ikhaya langaphakathi kunye noYilo
Ngubani ojonga ngaphandle, amaphupha; ojonga ngaphakathi, uyavuka. - UCarl Jung
Indawo yangaphandle ayisiyonto imiselweyo. Kwabaninzi abaqeshisayo kunye nabanini bamakhaya basezidolophini, ukukhula kwegadi yesiko akunakukhethwa konke konke.
Ukuba uzithanda njengomnini wesithupha esiluhlaza okanye ufuna ukuzama isandla sakho ekukhuleni imifuno kunye nemifuno, igadi yangaphakathi yeyona nto ilungileyo. Into oyifunayo zizikhongozeli ezimbalwa, ukubumba umhlaba kunye nezinye izityalo.
Ewe, izitiya zangaphakathi zinokusebenza kwaye zintle. Jonga ezi zimvo zangaphakathi kwigadi ukuze ufunde ukuba ungazifaka njani izityalo zakho ozithandayo kwindawo yakho yokuhombisa yasekhaya.
1. Umhlobiso wegadi yangaphakathi Izimvo
Kwigadi yangaphakathi egcwele, kuya kufuneka utyale imali kwifenitshala echongiweyo kunye nokuhombisa. Kwaye, ewe, ungalibali ukuthenga ngeyona ndawo yokutyala. Ngesikhongozeli esifanelekileyo, ungaguqula isityalo osithandayo sibe kwindawo ephambili yoyilo lwakho lwasekhaya.
Umthombo: @ jungleintheclub nge-Instagram
Umthombo: @lortielor nge-Instagram
Umthombo: @zielonawrona nge-Instagram
Iishelufu ezixhonywe eludongeni ziyimfuneko ukuba ufuna ukugcina indawo esemgangathweni kwaye ugqume iindonga ezingenanto ekhayeni lakho. Ungasebenzisa iishelfu ezidadayo rhoqo okanye ufumane ezizodwa eziyilelwe ukwenza igadi yangaphakathi.
Sebenzisa izityalo zokuma ukongeza isitayile kwizityalo zakho zendlu. Izitayile ziyafumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile zoyilo, ukuze ukwazi ukuthelekisa ngokulula yonke eminye imihombiso yekhaya lakho. Ngokuxhoma izimvo zezityalo, jonga iibhasikiti ezenziwe ngezinto ezinomdla okanye ezinye ezinemilo yejiyometri.
2. Igadi yokutyala egadini engaphakathi Izimvo
Ayisiyo kuphela ukuxhoma iibhasikithi zigcina indawo, kodwa zikwayindlela efanelekileyo yokubonisa umdiliya okanye iintlobo zeentlobo ezinjengeepothos zegolide, iBernern ferns, kunye nezityalo zesigcawu. Ngaphandle kokuxhoma izityalo kumbono woyilo lwakho lwangaphakathi egadini kukuchitha nje amandla!
Umthombo: @chi_loft_style nge-Instagram
Umthombo: @its_green_up_north nge-Instagram
Umthombo: @ j9s_jungle nge-Instagram
Umthombo: @thelittleknotshoppe nge-Instagram
Umthombo: @trhouseplants nge-Instagram
Izitshisi ezixhonyiweyo yindlela entle yokusebenzisa iifestile zekhaya lakho kunye nelanga ngqo abalibonelelayo. Faka nje amagwegwe eluphahleni ngentla kwaye ukonwabele igadi yakho entsha ejingayo. Shintsha iindawo eziphakamileyo zezityalo zakho uyilo olunomdla ngakumbi.
Enye yeendlela ezithandwayo kakhulu kukusebenzisa isiqwenga somthi njengenkxaso yeebhasikiti zakho ezixhonyiweyo. Ungahamba nembiza yodongwe yesiko okanye usebenzise ingqayi yemasoni ukutshatisa inkangeleko yezinto eziphilayo. Ukujikeleza okwangoku okanye okwangoku, zixhome izityalo kwintonga yekhethini yentsimbi okanye impahla yokuphinda yenziwe kwakhona.
Iitattoo zangaphambili zentamo yamadoda
3. Izimvo zegadi yangaphakathi emi nkqo
Eyona mbono yegadi yangaphakathi eyaziyo indawo, kuyakufuneka ucinge ngokuthe nkqo. Unokwenza igadi ekhawulezayo nelula naphi na ekhayeni lakho usebenzisa ishelufu yencwadi endala okanye ileli.
Umthombo: @aplantlady nge-Instagram
Umthombo: @botanneical nge-Instagram
Umthombo: @ ilovebeautifulplants88 nge-Instagram
Umthombo: @ jann.kus_ nge-Instagram
Iintlobo zezityalo ezincinci zezona zilungele ukutyala ngaphakathi ngale ndlela. Izityalo ezinkulu ziya kufuna ukuhlala ziqinile emhlabeni, kodwa ungafaka izityalo zemithi kumanqanaba aphezulu egadi yakho ethe nkqo.
Ewe unokuyihombisa igadi yakho ethe nkqo ngaphezu kwezityalo. Ukuxubeka kolunye uhombiso kunokunceda ukutsalela ingqalelo kuyilo lwakho lwegadi ngaphandle kokulayisha ngaphezulu indawo ngamagqabi.
4. Iishelufu neeNdawo zokuTyala zeGadi yangaphakathi Izimvo
Ukufumana uninzi kwigadi yakho yangaphakathi, jonga ngaphaya kwesityalo kunye nembiza yaso. Ukucwangcisa iiplanti kwishelufa okanye istendi kungathatha uyilo lwakho kwinqanaba elitsha. Kwaye zininzi izimvo zoyilo phaya ngaphandle kokucela nje ithuba ekhayeni lakho.
Umthombo: @bambiapricotpoodle nge-Instagram
Umthombo: @ ylu8es nge-Instagram
Umthombo: @rebeccarayla nge-Instagram
Umthombo: @jesduh nge-Instagram
Umthombo: @ huisje.plantje.beestje nge-Instagram
Umthombo: @jungletowers nge-Instagram
Uninzi lweeshelfu zezityalo ezinikezelweyo ziyafumaneka kwintengiso, kodwa ungaguqula nayiphi na indawo yokugcina iincwadi okanye i-hutch ibe sisiboniso sesitayile. Khetha ifenitshala enamanqanaba amaninzi kangangoko kunokwenzeka. Oku kuyakuvumela ukuba uguqule ubude bezityalo zakho kwaye usebenzise ngokupheleleyo amagqabi kunye nemidiliya.
Ukuma kwezityalo kuyindlela entle yokuqaqambisa isityalo esincinci osithandayo okanye ukugcina izimbiza zakho kumgangatho wakho. Ngelixa unokufumana isiseko esisisiseko sendawo kuyo nayiphi na ivenkile yehardware, jonga ukukhuthazeka kwezinye izinto zefanitshala. Iitafile ezisecaleni lolunye ukhetho olwahlukileyo, kwaye unokufumana enye yokutshatisa nayiphi na imeko yokuhombisa.
5. Iishelufu eludongeni kunye nokutyala kweengcinga zegadi yangaphakathi
Ubeko olubekwe eludongeni yenye yeendlela ezilungileyo zokugcina indawo yomgangatho kunye nembono yegadi yakho yangaphakathi. Beka nje iimbiza kwizishelufu ezidadayo kwindawo yonke. Unokwenza kwakhona udonga lwegadi nezicwangcisi ezizodwa ezinentaba.
Umthombo: @plantenerd nge-Instagram
ingonyama ijongene nomvambo esandleni
Umthombo: @sydsjungle nge-Instagram
Isithuba samalungiselelo amancinci amancinci ecaleni kodonga lwakho lokuziva uphefumlelwe yintsomi. Okanye baxhoma abatyali kufutshane kwaye ubazalise ngohlaza obuluhlaza njengeeferns kunye neepothos zodonga oluphilayo lwe-DIY.
Ukuba ufuna ukuphonononga imifuno ekhulayo okanye igadi yemifuno ngaphakathi, eli lithuba elifanelekileyo lokudlala ujikeleze igadi ye-hydroponic. Unokufumana iiseti zegidroponic ezenziwe kwangaphambili ezonyuka ngqo eludongeni okanye kwenye inkqubo yenkxaso. Unokusebenzisa igadi ye-hydroponic ukusasaza izindlu zakho ozithandayo ngaphandle komhlaba.
6. Iwindow kunye neeNdlu zeSunroom zangaphakathi zeGadi
Iifestile ezinkulu ziyi-godend kuye nakubani na ojonge ukuzisa izimvo abazithandayo zangaphakathi egadini ebomini. Ngendawo elungileyo kunye nokucwangciswa kwewindow ekunene, ungaguqula igumbi elinye libe yindawo enkulu kakhulu.
Umthombo: @seafaringsally nge-Instagram
Vary ingqokelela yakho yezityalo kunye neentlobo zazo zonke iintlobo zobukhulu obahlukeneyo, iimilo, kunye nemibala. Igadi yangaphakathi enezityalo ezikhulu nezincinci zisasazeke kwigumbi lonke zinomdla ngakumbi kunaleyo ineqela leembiza ezifanayo ngobukhulu.
Khumbula ukuba ukukhanya kwelanga kungena kuphela kwiinyawo ezimbalwa nakweliphi na igumbi, nokuba igumbi libonakala likhanya kwaye likhanyisile. Kuya kufuneka ugcine ingqokelela yakho emnandi kunye necactus kufutshane nomthombo wokukhanya. Kwakhona, umhlaba ohleli elangeni ngqo uya koma ngokukhawuleza kunangomthunzi - gcina izikhongozeli zakho!
7. Igumbi lokutyela kunye neKhitshi laseKhaya ngaphakathi Iingcamango
Izityalo ezinobumba zenza iindawo zokutya eziphambili. Le yindlela enye onokongeza ngayo ubomi bezityalo kwigumbi lakho lokutyela kunye nasekhitshini, ke sukungazityesheli ezi zithuba xa ucwangcisa igadi yakho yangaphakathi.
Umthombo: @eliotparke nge-Instagram
Umthombo: @zebodeko nge-Instagram
Umthombo: @ lifeinthesun7 nge-Instagram
Umthombo: @aba_dendrophile nge-Instagram
Amathuba kukuba, awunayo itoni yendawo eyongezelelweyo ekhitshini nakwiindawo zokutyela. Uya kufuna ukugxila ekuhlakuleleni izityalo ezininzi ezincinci kunokuba zimbalwa ezinkulu. Unokulinganisa itoni yezityalo ngaphezulu kweekhabhathi ezixhonywe eludongeni ngaphandle kokuphulukana nayo nayiphi na indawo esebenzayo. Iishelufa zokudada lukhetho olukhulu, ngokunjalo.
Ukuba unomdla wokukhulisa igadi yangaphakathi yemifuno, akukho sizathu sokunciphisa umda wakho kwindawo yangaphandle. Izityalo ezininzi ezityiwayo zikhula kakuhle kwigadi zangaphakathi. Ngaphezu koko, akukho nto ilunge ngakumbi kunokukhula kwemifuno ngaphakathi endlwini kunye nokufikelela kwengalo kwindawo yakho yokupheka.
8. Iingcebiso zeGadi yangaphakathi yeOfisi
Ngelixa iyimfuneko kwabaninzi, eyakho i-ofisi esekhaya mhlawumbi ayililo elona gumbi liphilileyo ekhayeni lakho. Nokuba uyayithanda into oyenzayo emsebenzini, akukho mntu ufuna ukuchitha ixesha elininzi eofisini.
Umthombo: @ aventyr.de_ nge-Instagram
Umthombo: @guild nge-Instagram
Igadi yangaphakathi yeyona ndlela ilungileyo yokuphucula eyakho Ukuhonjiswa kweofisi kunye nokunyusa imood yakho ngelixa ugcina indawo ekhangelwe ngobuchule kwiintlanganiso zoom okanye kubuso ngobuso kubathengi. Ukuba uhlala uzifumana uthatha iifowuni ekhaya, qiniseka ukuba ubeke ingqokelela yakho yezityalo ngasemva kwesihlalo sedesika yakho.
Gwema ukuhlanganisa ikhompyuter yakho ngezityalo ezininzi ezinobumba. Ngelixa izikhongozeli esinye okanye ezibini zilungile, uya kufuna ukugxila kwiishelufa okanye ekuxhonyeni iibhasikiti ukwandisa indawo. Beka isityalo esikhulu njenge-ficus okanye i-sansevieria ecaleni kwedesika yakho yamagqabi athe nkqo.
Ungayithelekisa igadi yakho yeofisi nefenitshala yala maxesha ethandekayo okanye uhambe ngobuhle obukhululekileyo. Sebenzisa ingqolowa yemithi yendalo kwindawo yonke yokufumana umbala ohambelana noko kunye nokuthungwa. Iindonga ezimhlophe ziya kukunceda uhlaza lwakho luvele ngasemva.
9. Iingcamango zegadi yangaphakathi kwiiGumbi lokuhlambela
Uninzi lwethu luphupha ngokuba negumbi lokuhlambela elikhumbuza indawo yokuphumla ye-spa. Ewe, akukho ndlela ibhetele yokufumana le mvakalelo kunokuba uhlaza luhlaza. Logama nje uyazi into osebenza nayo, igumbi lokuhlambela linokuphindeka kabini njenge-terrarium esayizi yobomi.
Umthombo: @be_kind_and_design nge-Instagram
Umthombo: @bellybaila nge-Instagram
Gcina igadi yakho yokuhlambela ngesityalo esithanda ukufuma, kodwa ke ulumke ekukhetheni iintlobo ezibuthathaka kubushushu ngesiquphe okanye kubushushu. Kuya kufuneka ukuba ufake izibane ezikhulayo, nokuba igumbi lokuhlambela lakho linefestile. Khumbula, zonke izityalo zifuna ubuncinci ezinye ukukhanya kwelanga ukuze kusinde.
iiTattoos zakhe nezakhe
Imiphezulu yeeflethi inqabile kwigumbi lokuhlambela, ke tyala imali kwiyunithi yokugcina ishelfu ukubonisa izityalo ezincinci. Sebenzisa izityalo ezinamagqabi amakhulu, e-draping - i-monstera kunye namagqabi esundu lukhetho olufanelekileyo- ukubiyela ibhafu yakho okanye ishawa. Hlanganisa izityalo zediliya ngaphezulu kwaye uziyeke ziye ezantsi ukunyusa indawo ekhoyo.
Nali icebiso lebhonasi: Xa ilixesha lokunkcenkceshela igadi yakho yangaphakathi, tsiba ukunkcenkceshela. Ungagcina ixesha ngokunika umhlaba wezityalo zakho ishawa yeqela endaweni yoko!
10. Izimvo ngegumbi lokulala ngaphakathi eGadini
Ecaleni kwegumbi lokuhlambela eliyintloko, igumbi lakho lokulala liya kuxhamla kakhulu kwizindlu ezincinci zangaphakathi kwigadi. Sonke siyazi ukuba zilunge kangakanani izityalo zangaphakathi emzimbeni wethu ukuze siphile qete ngokwasemzimbeni nangokwengqondo, kungoko kutheni ungazonwabeli izibonelelo kwigumbi olala kulo?
Umthombo: @kimm_stkz nge-Instagram
Umthombo: @ leaves.and_.bones_ nge-Instagram
Umthombo: @lepetitjungle nge-Instagram
Umthombo: @phyta_co_uk nge-Instagram
Khetha isityalo esinye okanye ezibini ezikhulu ukuze uzigcine phantsi njengezicatshulwa. Iibhasikiti ezixhonyiweyo ziyimpahla engakholelekiyo xa uyila igumbi lokulala zen igadi . Sebenzisa iishelufa okanye ezona ndawo zide kwibhedi yakho ukubamba iipothos okanye ingqokelela yezityalo zomoya. Okanye fakela iihaksi phezulu ukulingisa isibheno sebhedi yophahla.
Fihla iimbiza zetra cotta ezibandayo ezinezimbozo zokutyala eziphothiweyo ukuthambisa ukubonakala kwegadi yakho yokulala. Izintambo ezixhonywe ngentambo zeMacrame zisebenza kakuhle kwigumbi lokulala kunye nesimanje, i-bohemian, okanye ukuhonjiswa kwe-rustic umxholo.
11. Igumbi lokuhlala ngaphakathi ngaphakathi Iingcinga
Amagumbi okuhlala anamhlanje zahluka kakhulu kubume, ubuhle, kunye nenjongo. Ngelixa ukwenza igadi yangaphakathi kwigumbi lakho lokuhlala kufuna isithupha esiluhlaza, akukho nzima ngaphezu kokuhombisa naliphi na elinye igumbi ekhayeni lakho.
Umthombo: @bamaluzhome nge-Instagram
Umthombo: @ increee.fr_ nge-Instagram
Thatha isigqibo sokuba yeyiphi indawo ekugxilwe kuyo kwigumbi lakho lokuhlala - kwabaninzi, yiTV okanye eziko -Ukwakha uyilo lwegadi entle ejikeleze le nto. Sebenzisa izityalo ezingaphezulu kwamagqabi aluhlaza ukuyila le ndawo. Ungasebenzisa izityalo ezincinci, ezakhiwe ngakumbi kwenye indawo kwigumbi.
Ungalibali ukunxibelelanisa izikhongozeli zakho kunye nokuhonjiswa kwegumbi lakho lokuhlala. Iimbiza ezingafaniyo zisebenza kakuhle kwigumbi lesitayile se-boho kodwa kancinci-kwi indawo yokuhlala esemthethweni . Ungasoloko upeyinta izikhongozeli zakho okanye utyalomali kwizembozo ezifanayo ngokujonga ngokudibeneyo.
imikhono ye tattoo emkhonweni wamadoda
ukuba wenze ntoni kwigumbi elisecaleni
iiTattoos zegama lokugqibela kumqolo ongasentla
intswempu imnyama nomhlophe